Umhlinzeki we-Hurmare wefenisha ochwepheshe | Angeza
Inkonzo yesixazululo esisodwa
Faka ngokukhethekile ekuhlinzekeni imikhiqizo esebenza ngezindleko ngensizakalo yekhwalithi ye-Hardware yefenisha.
Noma nini lapho udinga, i-addith ihlala ilapha kuwe!
Sinikezela ngezinkulungwane zemikhiqizo kubandakanya uhla oluphelele lwe-Hardware yefenisha efana ne-hinge, isilayidi, isibambo, ukukhiya, isikulufa, umlenze wetafula neminye imikhiqizo ehlobene. Sithole izimvume njenge China, e-European and American Quality Callevel. Inhliziyo
Ifenisha ye-Hardware ActionOries Shanghai Addith Hardware Co LTD umphakeli ochwepheshe wefenisha yefenisha eneminyaka eminingi yesipiliyoni. Sinikezela ngezinkulungwane zemikhiqizo kubandakanya uhla oluphelele lwe-Hardware yefenisha efana ne-hinge, isilayidi, isibambo, ukukhiya, isikulufa, umlenze wetafula neminye imikhiqizo ehlobene. Sithole izimvume njenge China, e-European and American Quality Callevel.
Inqubo yokwenza ngokwezifiso:
Ukuhlelwa Komkhiqizo → Ukuhlolwa kwesampula → Umkhiqizo → Ukuhlola ikhwalithi → UkuhambisaInhliziyo
IShanghai Addith Hardware Co Ltd ngumhlinzeki we-Hurmare wefenisha ochwepheshe neminyaka eminingi yesipiliyoni. Sinikezela ngezinkulungwane zemikhiqizo yezesekeli zefenisha kufaka phakathi uhla oluphelele lwe-Hardware yefenisha efana ne-hinge, isilayidi, isibambo, ukukhiya, isikulufa, umlenze wetafula neminye imikhiqizo ehlobene. Sithole izimvume njenge China, e-European and American Quality Callevel.
Ngokusekelwe kokuhlangenwe nakho kwethu okucebile, iqembu labaqeqeshi kanye nohlelo lwesevisi olubhekele, nathi lubhekwa njengehhovisi lokuthenga lamakhasimende eChina. Siyajabula ukuba nemidwebo yakho namasampula ukuthuthukisa imikhiqizo emisha, futhi sizohlanganisa izinsiza zomkhakha ngempumelelo futhi silawule izindleko ngokuqinile ukwenza inzuzo enkulu kumakhasimende.
Siqoqe umthombo omkhulu cishe cishe ama-Hurmare we-Hurmaware ahlobene nawo wonke amaChina, lokhu kusenza sikwazi ukukunikeza noma yiziphi izixazululo ezenziwe ngenani ezengeziwe. Noma iyiphi insiza eyenziwe ngokwezifiso esingasekela engakusiza ukukhuthaza ibhizinisi elizohamba.
Sinezindinganiso zokulawula ezisezingeni eliphakeme kakhulu futhi kubandakanya nokuhlolwa ngokuqhubekayo kusuka kuma-SGS, i-BV neTuv enikeza amakhasimende ethu iminyaka engu-5 kuye kweli-10 kuziqinisekiso zekhwalithi yemikhiqizo yethu.
Iqembu lethu elinolwazi kakhulu, iqembu lobuchwepheshe lizokunikeza inkonzo yamakhasimende ephakeme nsuku zonke. Noma nini lapho udinga ukwesekwa komkhiqizo, amasampula, izikhathi zokukhiqiza ezisheshayo, ukuphuma okwengeziwe ... Sihlala silapha kuwe.
Sithembisa i-oda lakho lizothunyelwa kungakapheli inyanga eyodwa lapho setholwe idiphozithi. Ngesikhathi esiphithizelayo, isikhathi sethu sesikhathi sidinga ukulungiswa ngokufanele. Ukwaneliseka kwakho okuphelele kubaluleke kakhulu eqenjini lethu.
I-AddITH iyibhizinisi elaziwayo& Umhlinzeki we-Hurmare wefenisha onesisekelo sezesekeli zomkhiqizo wefenisha ephelele kanye nentuthuko, ezokuvakasha zamasiko, ezempilo kanye nokuphila kahle njengezimpiko zalo ezimbili, kanye nezinsizakalo zokumisa izixazululo zefenisha. I-AddIth's Newsroom Yekampasi ifaka umkhiqizo wakamuva, ithalente nezindaba ezihlobene nenkampani.
Sishiyele aIzwi elithunyelweyo